MAMMA MIA2တွင် YOUNG SAM ကိုမည်သူကစားသနည်း။ ကင်းဘရစ်ကောင်လေးနှင့် LAMDA ကျောင်းမှထွက်ခွာရန် JEREMY IRVINE နှင့်တွေ့ဆုံပါ - သတင်း
ဂျယ်ရမီ Irvine, Mamma Mia2တွင် Young Sam ကစားခဲ့သောပကတိအမွှေးအကြိုင်အကြောင်းမမေ့ပါစေနှင့်
လူငယ်ဆမ်လူငယ်ဟယ်ရီနှင့် Mamma Mia2မှလူငယ်ဘီလ် Mamma Mia2ဆိုတဲ့မှော်ပြပွဲကိုခိုးယူခဲ့ကြပြီ။ ညာဘက် Meryl Streep ရဲ့နှာခေါင်းအောက်မှာ။
မင်းလုပ်သင့်တယ် အားလုံးသည်သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်လူငယ်ဘီလ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် (ကျေးဇူးပြုပြီး RSVP) Young Sam ကိုသူကစားတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင် Josh Irvine မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအုပ်စိုးချုပ်ကိုင်ထားကြပါစို့။
သူသည်ကင်းဘရစ်မှအသက် ၂၈ နှစ်ရှိ Gemini ဖြစ်သည်
ဂျယ်ရမီဝီလျံဖရက်ဒရစ်စမစ် (အလယ်တန်းအမည်နှစ်မျိုး၊ ဘယ်လောက်ကောင်းသည်) သည်ကင်းဘရစ်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်နှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်တော်ကောင်းမွန်လှသည်။ သူသည် Bedford Modern School တွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူသည် Year 13 ပြဇာတ်တွင် Romeo ကစားခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ။
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 9:05 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2018 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
သူသည် LAMDA ၏တစ်နှစ်တာကိုပြီးစီးခဲ့ပြီးသူသည် Vibe မဟုတ်သောကြောင့်ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်
Wonderland မဂ္ဂဇင်းနှင့်အင်တာဗျူးတွင် သူက 'ငါလူစုလူဝေးထဲကနေထွက်သွားချင်တာကိုစောစောစီးစီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ' ထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်သူ၏ပထမဆုံးအခန်းကဏ္theမှာ RSC အတွက် Dunsinane ဖြစ်သည် ထို့နောက်သူသည် 'စာသားအတိုင်းသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကစားနေသူ' ဖြစ်သည်။
သူ့ကို Spielberg ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် War Horse မှလည်းကောင်း၊ 'Railway Movie' မှ Colin Firth အဖြစ်လည်းကောင်းသိနိုင်သည်။
သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအစဉ်အဆက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည် စံချိန်ချိုးသည် War Horse ရုပ်ရှင်တွင်သူသည်တော်ဝင်မင်းသမီးများနှင့်အတူဝိုင်သောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည်ကြီးစွာသောမျှော်လင့်ချက်များ၊ မီးရထားလမ်းရုပ်ရှင်၊ အမည်းရောင်ရှိအမျိုးသမီး ၂၊ မကောင်းသောပညာရေး၊ ရုပ်ရှင်နှင့် Stonewall တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် #TheRailwayMan ပြီးနောက် #MolinMia2 တွင် #ColinFirth နှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေထဲကတစ်ခုနှင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်။
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 12:44 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာ 18, 2017 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
#tbt #RobertEmms #WarHorse # 2011 ကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်ရွှံ့နွံလာခြင်း
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 8:38 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 2018 ရက်တွင် (jeremy.irvine @)
တီဘီ #GreatExpectations 2012
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 10:47 pm တွင် PDT မှာနိုဝင်ဘာ 1, 2017 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
သူ၏လှပသောဆံပင်ရွှေရောင်ရည်းစားဂျိုဒီစပန်ကာသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Midwifery ၌ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး King's မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်
နောက်ဆုံးတွင် #repost #bringonthebabies ကိုဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်
မျှဝေသည် ဂျိုဒီ Spencer 2:12 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 23, 2017 ရက်တွင် (@jodiespencer_)
သူ၏ခွေး Dudley သည် Instagram တွင်ထူးခြားသည့်ဗေဒင်ရှိသည်
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 9:53 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 22, 2018 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 1:11 pm တွင် PDT မှာ 2017 မေလ 28, 2017 (@ jeremy.irvine)
သူသည် DSqured၊ Saint Laurent နှင့် Lacoste တို့ကဲ့သို့ကြီးမားသော menswear အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပုံမှန်မျက်နှာဖြစ်သည်
သူသည် Mamma Mia2စာနယ်ဇင်းခရီးစဉ်မှ Milan Men's Fashion Week သို့ DSquared ၌ထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် Lacoste နှင့်တင်းနစ်ကစားနေစဉ် Mr Porter ကိုလွှတ်တင်ပြီး Hugo Boss ကဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအတွက်ဝတ်ဆင်ထားသည်။
#ATPtennis တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယနေ့ညရောက်ရှိနေသောအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် @lacoste! ? (Lacostes ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောဘာမျှမ?)
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 3:01 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 18, 2017 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
@ dsquared2 ဖက်ရှင်ပြပွဲ ? ?
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 9:05 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 18, 2018 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
လွန်ခဲ့သောညကလန်ဒန်တွင် #GQmenoftheyear ဆုများ၌ငါ့ကိုရရှိခဲ့သောအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 1:27 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာ 6, 2017 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
သူသည် Ellie Goulding ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်သူမချစ်သူရည်းစားအသစ်မွေးဖွားစဉ်ကချိန်းတွေ့ခဲ့သည်
@elliegoulding နှင့်ဂျယ်ရမီ Irvine မနေ့က Glamour ဆုပေးပွဲ။ တ ဦး တည်းရုပ်ပုံအတွက်အလွန်အကျွံစုံလင်ခြင်း pic.twitter.com/MHbxZQHRDN
- ariadne (@ellieg_jessiej) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၅ ရက်
ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည်အဆင့်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးကိုက်ညီတဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီတွေ၊ beanies နဲ့ Doc Martens ကိုစတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး ၁၀ လပဲကြာခဲ့တယ်။
Kevin Spacey နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးတဲ့နောက်မှာသူက #MeToo လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံရတာဂုဏ်ယူပါတယ်
People မဂ္ဂဇင်းက Irvine အား Spacey ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့်အင်တာဗျူးခဲ့သည် Billionaire Boy's Club ကိုဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာပါ။ သူကပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလကပြောဆိုမှုများကိုပြောကြားခဲ့ခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရကြောင်းခံစားရကြောင်းစွပ်စွဲသူများရှေ့မှောက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အနုပညာအနုပညာ (တကယ်အလုပ်ကောင်းလျှင်!) ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ #BillionaireBoysClub သည်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ရှိပြီးဤနွေရာသီတွင်ထွက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ?
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 10:14 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 20, 2018 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
'Trump ပိတ်ပြီးငါ့ကိုသားညှပ်ပေါင်မုလုပ်!' နှင့် 'ကလေးများသည်အခြေခံကျသောအခွင့်အရေးများရလိုကြသည်။ ' ဝေးနေဖြင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဆိုင်းဘုတ်များခဲ့ကြသည် ??
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 10:09 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 21, 2017 ရက်တွင် (jeremy.irvine @)
ဒါအရမ်းကောင်းတယ် #WomensMarch #TrumpProtest
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 6:34 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 21, 2017 ရက်တွင် (jeremy.irvine @)
သူ့ရဲ့ဆံပင်ရှည် Mamma Mia2မှာဆမ်ကိုဆံပင်ညှပ်ဖို့ဆံပင်ရှည်ထားပြီးသူ့ကိုအရမ်းတော်တဲ့အတွက်ငါစိတ်ပျက်မိတယ်
၂ နာရီအတွင်းသင့်ဆံပင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားအောင်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းသစ် *** စူပါအံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံး !!! သွားပြောင်လား ?? ပြဿနာမရှိပါဘူး! Irvine ဆံပင်ကြီးထွားမှုနည်းစနစ်အသစ်ကိုသုံးကြည့်ပါ။ #hairstyles #hair # MammaMia2 #haircut (Giuliano မှဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး မပါ ၀ င်)
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 9:52 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 8, 2017 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
kaleo @ radio 104.5's 10th မွေးနေ့ပွဲ camden, nj, camden, nj, ဇွန် 11 တွင်နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲည
သူသည်အလွန်အားကစား၊ ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သူ Josh Dylan နှင့်အတူမာရသွန်ပြေးပွဲ၊ လန်ဒန်မှ Brighton သို့ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်း။
#DynaBros @_joshdylan 'လေ့ကျင့်ရေးမာရသွန်အနိုင်ရသူ' မရှိပါ
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 9:16 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 13, 2018 ရက်တွင် (jeremy.irvine @)
နံနက်တိုင်း # mammamia2 #worknotwork #mammamiamovie အတွက်အလုပ်လုပ်ရန် 'အသွားအပြန်'
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 9:25 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာ 12, 2017 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
စနေ၊ တနင်္ဂနွေကနေကျွန်တော့်ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အဆင့် ၄ ဆင့်? စီးပါ။ #NorthLondon ➡️ # ဘရောင်း
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Irvine 10:52 pm တွင် PDT မှာမေလ 21, 2018 ရက်တွင် (@ jeremy.irvine)
၁) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု Josh Dylan: Mamma Mia2မှလူငယ်ဘီလ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းလောင်း
နှစ်) Mamma Mia2မှာဘယ်ဇာတ်ကောင်: Here We Go Again! မင်းရဲ့ uni လား
၃) Mamma Mia အတွက် ode: မည်သည့်အခါသမယအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်